I-Addvocate: Khomba, Khulisa, Kala, Thuthukisa, Busa | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 1, 2013 NgoLwesihlanu, Septhemba 27, 2013 Douglas Karr
Izinkampani azisebenzisi amandla amakhulu ezinawo ngaphakathi uma kuziwa ezinkundleni zokuxhumana. Sibheka ngaso sonke isikhathi njengoba izinkampani zisebenzisa 1 noma 2 abantu bezindaba zenhlalo ukuphatha inkampani yezokuxhumana. Basebenza kanzima, basabalalisa okuqukethwe okuhle, kepha bakumabhamuza abo uma kukhulunywa ngokuqhakambisa okuqukethwe kwabo. Uma ufuna ukuncintisana ngempela, kungani ungasebenzisi abasebenzi bakho ukukusiza ukukhuthaza ubukhona bakho ku-intanethi?
Isengezo ivumela izinkampani ukuthi ziqaphe futhi zenze ngcono ukutholakala komkhiqizo wazo ngokwenza ukuthi kube lula kubasebenzi ukuthi babelane ngokuqukethwe okuthokozisayo futhi kube lula kubakhangisi ukulandelela ukubamba kwabo iqhaza nokufinyelela kukho.
Isicelo sihle futhi silula. Abasebenzi bakho baxhuma amanethiwekhi abo omphakathi, engeza i-plugin yesiphequluli, nokungena ngemvume. Kwibha eseceleni yangakwesobunxele, ubhala okufunayo okwabelwana ngakho, engeza inothi langasese labasebenzi bakho, bese uqhafaza ukukhuthaza! Manje ngamunye wabasebenzi bakho uzobona okuqukethwe abazokukhuthaza esikrinini sabo:
Isebenza kanjani i-Addvocate?
Khomba - Abasebenzi bakhetha ukungena ohlelweni lwe-Addvocate bese besetha iphrofayili, bekukhombisa ukuthi ngubani omele umkhiqizo wakho kwezenhlalo. Wonke amaphrofayli angahlelwa ngeqembu, asesheke ngamagama, isibambo se-Twitter, umnyango noma isethi yamakhono ukuthola ukubukeka okuphelele nokwenziwe ngokwezifiso kunethiwekhi yakho. Lokhu kwenza kube lula ngokumangazayo ukulandela ukuthi ngubani osebenzayo, bangaki abantu abahlanganyela nabo, nokuthi umuntu ngamunye uhlela kanjani enhlanganweni yakho.
Khanyisa - Uma isisebenzi sithola okuthile okuthakazelisayo ku-intanethi, bamane bachofoze isengezo se-Addvocate kubha yamathuluzi esiphequluli sabo ukuphakamisa okuthunyelwe kwabasebenza nabo, bangeze incazelo emfushane yokuthi okuqukethwe yini nokuthi kungani kufanelekile. Njengoba abasebenzi bephequlula imifudlana yabo, bangakhetha lokho abafuna ukuwabelana ngamanethiwekhi abo, babeke amazwana kokuthunyelwe, futhi baqhubeke nengxoxo ngokuphakamisa okunye okuqukethwe okuhambisanayo.
Lokulingene (I-Enterprise Edition Kuphela) - Lapho nje umsebenzi ephakamisa okuthunyelwe, kuya kulayini wokulinganisela, lapho omengameli bakho babuyekeza futhi bavume ukuqinisekisa ukuthi kuphela okuqukethwe okufanelekile kwabelwana ngakho. Abomengameli bangabuye bahlele lapho okuthunyelwe kungena ekusakazweni, futhi bancoma okuqukethwe kubantu abathile, amaqembu, noma iminyango ukukhuthaza ukwabelana okusebenzayo.
Linganisa - I-Addvocate's analytics ake ulandelele yonke into, kufaka phakathi ama-URL amafushane namakhodi womkhankaso, ukukala ukufinyelela kwakho kweqiniso kwezenhlalo. Ungathola kahle ukuthi abantu bathini, ukuthi amanethiwekhi abo asabela kanjani, nokuthi bangobani ama-superstars enkampani yakho yezokuxhumana.
Lungiselela - Qhubeka ukhulise ukufinyelela kwakho ngokusebenzisa i-Addvocate's analytics ukuthuthukisa nokwenza ngcono imiyalezo yakho. Dala okuqukethwe okwenzelwe ukusizakala ngezihloko ezidumile, landelela izinsuku ezisebenza kakhulu zesonto, nokuqukethwe kofanele kubasebenzi bakho abanethonya elikhulu.
Mbusi (I-Enterprise Edition Kuphela) - Kuhlelo lwe-Addvocate, abasebenzisi bamenyiwe futhi bavunyelwe ukufinyelela kuma-akhawunti anegama. Lapho sebeshiyile enhlanganweni, lezi zincwadi ezikhishiwe ziphelelwa yisikhathi ngokushesha, okuvumela ukuthi inqubo yokufinyelela ibe inqubo elula kakhulu.
Okthoba 1, 2013 ngo-9: 22 AM
Siyabonga ngokwabelana noDoug! Kwakungukufundwa okuhle! Siyabonga ngokunikeza amakhanda phezulu!